How to keep our town Hazrat Muhammad (S.A.W) Said that "Cleanness is half Truth" Na mbụ, we should follow this Hadees of (P.B.U.H) It's mean that we are to clean our each an everything which is belonged to our living style, For Example, We should clean our clothes, body, teeth and this place where we are living when we see any society ever. In which style they are living, if we see that they are living Uncleanness suppose, is their home in their body, clothes are dirty, So we should try GỤKWUO [...]
Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Series of organic compounds which have a same functional group, similar structural feature but differ from each other by an integer number of CH2 (methylene otu) a na-akpọ "Homologous usoro". The ọnụ ọgụgụ nke homologous usoro iche site na molekụla uka 14. Njirimara Homologous usoro: All nọmba nke homologous usoro nwere yiri owuwu. Physical properties of homologous series change progressively GỤKWUO [...]
Esi jikọọ Internet na kọmputa na laptọọpụ High kasị mma Atụmatụ
Esi jikọọ internet na kọmputa na laptọọpụ. Mbụ i nwere kọmputa na ị chọrọ igosi na wifi internet na jikọọ na wifi internet. Ya na o kwere omume mbụ kọmputa wifi internet onye USB etinye na kọmputa gị mgbe ahụ na-egosi na kọmputa gị WiFi internet. M zuru akụziri gị otú internet jikọọ na kọmputa na laptọọpụ. Ugbu a ị chọrọ ka gị na laptọọpụ iji WiFi internet. Laptọọpụ ugbua putted na USB n'ime usoro. Mbụ click desktọọpụ akara ngosi na oge n'akụkụ. You click to connect and put GỤKWUO [...]